काठमाडौं । नेकपाका युवा नेता तथा पत्रकार सुर्य थापाको फेसबुक टिप्पणीले प्रष्ट हुन्छ पुराना नेता भरतमोहन अधिकारीको स्वास्थ्य उपचारमा सरकार र अस्पताल कति गम्भीर छन् भन्ने । खासगरी अस्पतालको लापरवाहीबारे अस्पताल प्रशासन र सरकारको सम्बन्धित निकाय किन मौन छन् भन्ने प्र्रश्न पनि उठेको छ ।
नेता अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पत्रकार थापाले लेखेका टिप्पणी जस्ताको तस्तै:
@ ह्याम्स अस्पताल । भरतमोहन अधिकारी यस अस्पतालमा सारिनुभएकाे छ । सानेपाबाट नजिक हुनाले उहाँ मेडिसिटी अस्पताल भर्ना हुनुभयाे । केही दिनपछि डिस्चार्ज गरिनुभयाे । पुनः स्वासप्रस्वास लगायत विभिन्न समस्या देखियाे र मेडिसिटीमै भर्ना हुनुभयाे । एक महिना उपचार गर्दा समेत २० काे १९ नभएपछि उहाँलाई हिजाेदेखि ह्याम्स अस्पतालमा सारिएकाे हाे ।
डा. भगवान काेइराला, डा. मनबहादुर केसी र डा. अर्जुन कार्की लगायत देशले भराेसा गरेका र उहाँको स्वास्थ्य समस्याबारे पूर्व जानकार विशेषज्ञहरूकाे उपचारले उहाँ शीघ्र निकाे भएर घर फर्किनुहुने विश्वास छ ।
खासमा याे अस्पताल कसकाे हाे ? भरतमोहन अधिकारीकाे त याे हविगत बनाइन्छ भने सर्वसाधारणले यहाँ कुन हालत भाेगिरहनु परेकाे हाेला ?
शीघ्र स्वास्थ्यलाभकाे कामना ।
२०७५ माघ २६ शनिबार २०:०६:०० मा प्रकाशित